आध्यात्मिक चिन्तन वर्गका सम्पूर्ण समाचारहरु
मानव विकासको सुचकाङ्कलाई हेर्ने हो भने के सिद्ध हुन्छ भने यो विकास संवेदनाहीनताबाट संवेदनशीलतातर्फ भएको छ । संवेदनशीलताको स्तरले नै कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो सम्बन्ध, जिम्मेवारी, जवाफदेहीता, वातावरणीय सचेतना, आदि कुरालाई कुन स्तरबाट पूरा गर्दछ भन्ने जनाउँदछ । आफूमा असल चरित्र बनाउनु, परिवारलाई खुसी राख्नु, समाजलाई असल बाटोतर्फ लैजान नेतृत्व गर्नु वा सहयोग गर्नु, राष्ट्र र विश्वको भलाइका बारेमा सोच्नु र कार्य गर्नु, वातावरण जोगाउनु भनेको उच्च संवेदनायुक्त जीवन हो । मान्छेमा संवेदनाको विकास स्लो मोसनमा भई नै राखेको छ । कतिपय परम्परागत तथ्यहीन रीतिरिवाजलाई इन्कार गर्नु र वैज्ञानिक र तथ्यपूर्ण कुराहरूको खोजी गर्नु यसैको उदाहरण हो ।
एउटा समय थियो जहाँ मान्छे पूर्ण हुनसक्तछ भन्ने कुरामा विश्वासै थिएन । अहिलेको आधुनिक भनिने समाजमा पनि यो मान्यता विद्यमान नै छ । जसरी कक्षामा बल्लतल्ल उत्तीर्ण हुने विद्यार्थीका लागि डिस्टिङ्गसन र फ्रष्ट डिभिजन अति असम्भव कुरा हो भने अध्ययनशील विद्यार्थीका लागि यो सरल काम हो, त्यसैगरी चरित्रको पूर्णता पनि सबैका लागि सजिलै प्राप्त गर्न सक्ने विषय कदापी होइन तर संवेदनशीलतालाई बढाउँदै जाँदा पुगिने अन्तिम गन्तव्य भने अवश्य हो । यद्यपी हामीले परोपकारी व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र र संसारको कुरा गर्ने हो भने उक्त कुरा चरित्रको पूर्णताको आधारशीलामा मात्र दीगो र अनन्त हुन सक्तछ ।
मान्छेमा संवेदनशीलता स्वचालित रूपमा विकास हुने कुरा होइन, न त चरित्र नै । यसका लागि मेहनतको अत्यन्त जरुरत पर्दछ । विकासको एक तहबाट अर्को तहमा उक्लिनका लागि मात्र पनि युगौं युगको समय लाग्नसक्छ । दशौंदेखि सयौं पुस्ता लाग्न सक्छ । चरित्रहीन व्यक्ति जीवनको कुनै पनि आयाममा संवेदनशील हुनै सक्तैन । चारित्रिक पूर्णता हासिल गरेको व्यक्तिको एउटा गुण हो आफ्ना इन्द्रियहरूलाई बसमा राख्न सक्नु । एउटा इन्द्रियलाई बसमा राख्न नसक्नेले अर्को इन्द्रियलाई बसमा राखेको हुन्छ भन्ने कुरा सत्य हुनै सक्तैन ।
संवेदनहीन व्यक्तिमा कसरी संवेदनशीलताको विकास हुन सक्तछ त ? जब संवेदनहीन कुनै व्यक्तिले कसैले अस्वाभाविक रुपमा त्याग र समर्पण गरेको देख्दछ अनि उसको हृदय मुभ हुन्छ । अनि ऊ अलि बढी संवेदनशील बन्न पुग्छ । जस्तो केही दिनअघि मात्र १२ दिनसम्म आमरण अनसन बसेका डा. गोविन्द के. सी. लाई नै लिऔं । जब उनले अनसन शुरु गरे त्यसले जनमानसलाई खासै तताउन सकेको थिएन । तर जब मिडियामार्फत् उनको अवस्था नाजुक हुँदै गएको समाचार संप्रेषण हुँदै गयो मान्छेहरू उनको पक्षमा उभिँदै गए । माफियाहरू हस्पिटलमै गएर कुर्ले पनि त्यो आवाज निरीह सावित भयो । पुनः एकपटक माफियाहरू पछि हट्न बाध्य भए । यससँगै नेपालीहरूको संवेदनशीलताको स्तर पनि पक्कै माथि उठेको हुनुपर्दछ । यसले अब नेपाली समाजले पुनः कुनै पनि अन्याय र अत्याचारलाई मुकदर्शक भएर टुलुटुलु हेरेर बस्ने हैन कि सक्दो प्रतिकार गर्ने साहस दिनेछ । यसबाट त्यागबिना कुनै पनि असल उपलब्धी सम्भव छैन भन्ने सन्देश पनि समाजले पाएको हुनुपर्दछ ।
यसरी कुनै पनि समाजको सम्वेदनशीलताको स्तरोन्नतिका लागि रियल लाइफ हीरोहरूको जरुरत पर्दछ, जसले समग्र जनताको संवेदनशीलताको स्तरोन्नतिका लागि पहल गर्न सक्तछन् । प्रारम्भमा पर लुकेर हेरी बस्छ समाज । जब निकै अफ्ठेरो स्थिति आइपुग्छ, अनि मात्र समाजले आवाज बुलन्द गर्न थाल्दछ । यस्ता धेरै उदाहरणहरू संसारमा पाउन सकिन्छ । शुरुमा यातना दिने व्यक्तिहरू नै पछि ठूला शुभचिन्तक र भक्तसमेत बनेका उदाहरणहरू संसारमा छन् । विनाकुनै कसुर भोगिएको चरम यातना र विनाकुनै स्वार्थ उठाइएको बोझले सामाजिक विकासका लागि मलजलको काम गर्दछ । समाजका लागि यस्तो बोझ उठाउने व्यक्तिलाई समाजसेवी भनिन्छ भने राज्यका लागि यस्तो बोझ उठाउने व्यक्ति देशभक्त हो । त्यस्तै संसारका लागि नै यस्तो बोझ बोक्न तयार व्यक्ति सन्त हो । त्यस अवस्थामा सीमाना पनि गौंण हुन जान्छ । त्यस्ता व्यक्तिहरूले बोकेको बोझबाट मन्द–मन्द गतिमा समाजको उत्थान भई नै राखेको हुन्छ ।
डा. के.सी. ले राज्यका लागि उठाएको उक्त जोखिमले नेपाली समाजको उत्थानमा भूमिका खेलेकै हुनुपर्दछ । पूर्ण रूपमा माफिया भाइरसग्रस्त मेडिकल लगायत राजनीतिक, प्रशासनिक, शैक्षिक सबै क्षेत्रका माफियाहरू पनि डा. के.सी.को एण्टिमाफियाक डोजले केही हदसम्म गुफा पस्न बाध्य भएका छन् । समाज उत्थानका लागि आफ्नो स्वार्थभन्दा निकै माथि उठेर कर्म गर्ने डा. के.सी.लाई हार्दिक नमनः ।